India tour of Zimbabwe 2016 - news, results, live scores
India tour Zimbabwe to play three One-Day and three Twenty20 Internationals in June 2016.
India's tour of Zimbabwe - Reloaded
A handful of debuts, a seasoned leader, an ODI series whitewash and a rape controversy - India’s tour to Zimbabwe reloaded, and reviewed by Bisma Ahmed, who watched it all unfold first hand.
MS Dhoni equals Ricky Ponting's captaincy record
Indian limited overs captain MS Dhoni has equalled former Australian skipper Ricky Ponting's record of captaining his country in the most number of international matches.
The International Cricket Council has penalised Zimbabwe for maintaining a slow over-rate in the first Twenty20 International against India in Harare on Saturday.
India storm back into series with comprehensive 10-wicket win
After a comprehensive bowling effort led by Barinder Sran’s four-wicket haul, the Indian openers chased down a target of 100 runs in just 13.1 overs and stormed back to level the series 1-1 with a comprehensive 10-wicket win against Zimbabwe in the second Twenty20 International in Harare.
Riding on an excellent half-century from Elton Chigumbura and a clinical death bowling display, Zimbabwe managed to outsmart India by two runs in the first Twenty20 International in Harare.
Williams, Ervine out of T20I series against India
Craig Ervine and Sean Williams will not be featuring in the upcoming three-match Twenty20 International series against India due to the injures they sustained during the recently concluded One-Day International series.
Bumrah four-fer sets up 3-0 clean sweep for India
After a four-wicket haul from Jasprit Bumrah skittled Zimbabwe for 123 in 42.2 overs, Lokesh Rahul and Faiz Fazal hit unbeaten fifties and helped India chase down the target in 21.5 overs, securing a 10-wicket win in the third One-Day International in Harare and complete a 3-0 series whitewash.
Bowlers deliver 2-0 lead for India thanks to comprehensive eight-wicket win
The Indian bowlers put on a collective performance to dismiss Zimbabwe for 126 runs and the batsmen needed just 26.5 overs to chase down the total, securing an unassailable 2-0 lead in the series with an eight-wicket win in the second One-Day International in Harare.
Lokesh Rahul and Ambati Rayudu shared an unbeaten 162-run stand for the second wicket as India completed a convincing nine-wicket victory over Zimbabwe chasing down 169 in the first One-Day International in Harare.
Tinashe Panyangara to miss India series due to back injury
Zimbabwe speedster Tinashe Panyangara will not be a part of the squad which will take on India in the upcoming limited overs series due to a back injury.
Zimbabwe kick-start preparations for India series with training camp
Zimbabwe have organised a couple of training camps in Bulawayo and Harare for a total of 33 players in order to begin preparing for the upcoming campaign against India.
India appoint Sanjay Bangar as coach for Zimbabwe tour
Board of Control for Cricket in India has announced former Indian all-rounder Sanjay Bangar as the coach of the national team for the tour of Zimbabwe in June.
Fazal, Chahal included in Indian squad for Zimbabwe tour
Indian selectors have named Vidarbha batsman Faiz Fazal in a 16-man squad for the One-Day International and Twenty20 series to be played in Zimbabwe.
Zimbabwe announce limited overs series against India
Zimbabwe Cricket has announced that they will host India for a limited overs series consisting of three One-Day Internationals and three Twenty20 internationals to be played in the month of June.